Ny fampifangaroana loko amin'ny akanjo
Amin'ny famolavolana sy fanavaozana ny poketrany, tokony ho fantatry ny zazavavy ny fitsipika fototra amin'ny fampifangaroana loko sy lamba amin'ny akanjo. Raha ny marina, raha tsy te hijery ny lamaody fa tsara tarehy izy, dia tokony ho afaka hampifangaro ny loko marina. Ankizivavy maro, mitaky lamaody, manao loko mamirapiratra, mamorona sary mahatsikaiky. Izany no antony maha-zava-dehibe ny manana ny tsiambaratelon'ny psikology loko .
Saingy ny sasany, matahotra ny hanao hadisoana, mandà tanteraka ireo zavatra mamirapiratra sy mahafinaritra. Androany dia hiresaka momba ny fametrahana ny loko marina amin'ny akanjo, ary ny fomba hamoronana sary mahafinaritra amin'ny fanampiana ireo zavatra mamirapiratra.
Raha eo am-pivarotana, ampiasao ny palette ny lokony amin'ny akanjo. Amin'ny maha mpanampy azy dia mety ho faribolana loko, izay ampiasain'ireo mpamorona malaza, lamaody, ary mpanakanto. Ny faribolan'ny loko dia mampiseho ny loko sy ny lokony mifamatotra, ary izay tsy izany. Ao anatin'ny faribolana dia misy loko telo lehibe - mena, manga sy mavo. Rehefa mampifangaro ny loko roa lehibe dia afaka mahazo loko hafa - volomparasy, maitso ary menaka. Raha mampifangaro ny loko maina miaraka amin'ny sekoly ambaratonga faharoa, dia mahazo loko iray ianao. Ny loko teritery dia ireo izay tsy anisan'ny lehibe sy faharoa. Raha hitanao ny kodiarana loko, dia tsikaritrareo fa tsy misy fotsy fotsy, mainty, mainty ary mavo. Ireo loko ireo dia heverina ho tsy miandany ary mifangaro amin'ny loko sy ny loko rehetra.
Ohatra, ny firaiketana mainty amin'ny akanjo dia malaza. Raha manapa-kevitra ny hanao pataloha mainty ianao dia tsy ho sarotra ny haka ny fitafiana ivelany sy ny fitaovana, satria ny loko rehetra nofidinao, dia hampifandray azy amin'ny mainty hoditra.
Androany, ny mpamorona dia nanolotra antsika ny singa faran'izay tsara amin'ny akanjo. Ohatra, mijery sy mamirapiratra ireny andro manjavozavo sy mamy ireny, mametraka akanjo manga sy akanjo mavomavo mamirapiratra. Ny sary toy izany dia hanandratra avy hatrany ny fanahinao ary hanome anao hery amin'ny andro manontolo.
Ny fahafahana mampifanaraka ny lokony amin'ny akanjo, ianao dia ho ny lamaody indrindra, tsara tarehy sy mahafinaritra. Fanandramana mahomby!
Ny endriky ny lokon'ny fahavaratra
Ahoana no hanavahana volafotsy amin'ny sandoka?
Modely hoditra lamaody - 147 sary avy amin'ireo karazana lamaody indrindra amin'ity vanim-potoana ity
Inona no tokony hatao amin'ny leoparda?
Manao ahoana ny manao akanjo?
Fitafy ho an'ny vehivavy aorian'ny 40 taona - 52 sary amin'ny akanjo marevaka indrindra amin'ny fotoana rehetra
Tatitra momba ny tuberkilosa
Valim-panontaniana tena tsara
Ahoana no tsy hajanona amin'ny kodiarana - ny fomba mahomby indrindra
Fluditik ho an'ny ankizy - fitsipika manan-danja amin'ny fidirana
Miala sasatra amin'ny ririnina - tsotsotra tsotra ho an'ny fiarovana mahafinaritra
Ahoana ny fomba hahatonga azy ho tsara foana?
Ahoana no itiavanao ny asanao?
Tapa-porofo eny amin'ny tany
Torohevitra ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny - ahoana no fomba hifidianana fikasana tsara ho an'ny varavarankely?
Ny labozia indometacine amin'ny fahantrana
Hilary Duff namaly ireo bodisheymers mba hanakiana ny sariny amin'ny bikini
Ahoana no hankalaza ny Halloween ao an-trano?
Fiompiana Aquarium - votoatiny